Aadan Daahir oo xaaskiisa ku dilay Ingiriiska | Faafan News
Aadan Daahir oo xaaskiisa ku dilay Ingiriiska
Magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska ayaa waxaa ka dhacday dhacdo xanuun badan, taasi oo ah in Aadan Daahir oo Soomaali ah uu xaaskiisa Aasiya Cumar uu ku dilo halkaasi, sida ay sheegeen Booliska dalkaasi.
Arrintan ayaa la sheegay in ay ka dhalatay kadib khilaaf yar oo maalmahan ka dhex jiray Aadan Daahir iyo xaaskiisa ooo uu gacantiisa ku dilay, wuxuuna dilkeeda u adeegsaday Mindi, taasi oo uu kaga dhuftay qeybaha dhexe ee jirkeeda.
Aasiya Daahr oo markii hore dhaawac ahaan loogu qaaday Isbitaalka ayaa la sheegay in markii dambe ay u geeryootay dhaawicii soo gaaray, maadaama Mindida uu meel halis ah kaga dhuftay.
Ayaan C/laahi Macalin oo qaraabo dhow ay ahaayeen Marxuumad Aasiya Cumar oo la hadashay VOA ayaa sheegtay Aasiya in ay aheyd 27 sano jir, oo Aadan u dhashay laba cauur ah, oo wiil iyo gabar kala ah.
Waxay sheegtay Aadan iyo xaaskiisa in ay is qabeen mudo 9 sano ah, balse maalmihii dambe uu ninka ku furnaa Problem-yo ku aadan in sharciga dalkaasi lagala laabanayo, taasina loo maleynayo in uu kala dul dhacay xaaskiisa.
Ayaan C/laahi ayaa sidoo kale sheegtay Dadka waalidiinta u ah qoyskan dareenkooda in uu noqday mid ay aad uga naxaan arrintan, balse looga baahan yahay sabar iyo iimaan, maadaama wax walba ay xag Alle ka qoran yihiin.